Kedu ka search engine si eme njem okporo ụzọ?
N'ọdị ahịa azụmahịa ụwa dị ugbu a, e nwere ọtụtụ ụzọ ndị nwe ụlọ ọrụ nwere ike isi mee ka okporo ụzọ ha webata. Enweghị obi abụọ ọ bụla, anyị na-emezigharị. Anyị nwere ike ịdọrọ ọ bụghị naanị na organic (search) okporo ụzọ, ma akwụ ụgwọ, elekọta mmadụ na Ntuziaka. Ndị a niile nwere ike imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị. Otú ọ dị, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè (search) okporo ụzọ bụ onye isi na-ahụ maka okporo ụzọ weebụ dịka ọ bụ onye ruru eru na nke a gbanwere. Ụgbọ okporo ígwè na-eme ka ihe karịrị pasent 50 nke ndị ọbịa niile na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa na blọọgụ. Ọ bụ ya mere ọrụ anyị bụ isi bụ iji dọta mmasị ndị ọbịa na-echegbu onwe ha karịa nyocha ma gbanwee ha na ndị ahịa anyị na-akwụ ụgwọ mgbe nile. N'ezie, ọ dị mfe ịzụta okporo ụzọ kama ịnweta ya nke ọma. Otú ọ dị, ndị ọrụ nwere ntụkwasị obi karịa na weebụsaịtị ndị a na-etinye na TOP nke ọchụchọ ọchụchọ. Ọzọkwa, a na-elebara okporo ụzọ ndị ọzọ anya karịa ụgwọ ma nwee ohere ohere. N'isiokwu a, anyị ga-atụle site na ụzọ anyị nwere ike isi malite ịnweta okporo ụzọ site na engines ọchụchọ.
Gịnị bụ ihe mere ị ga-eji nweta okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè?
Ọnụ ọgụgụ kachasị nke uru inweta ndị ọrụ na-abịa na saịtị gị site na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ pụtara na ndị niile na-etinye na nchọta ozi nchọta nke Google na ajụjụ ọchụchọ na-enweta nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ọdịnaya weebụsaịtị gị na-emetụta ndị ọrụ ntanetịime, ha ga-adaba na saịtị gị ma ghọọ ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ahịa. Search engine na-aba uru maka ịde blọgụ ka ndị ọrụ ga-ahụ mgbasa ozi ndị ọzọ dabere na ajụjụ ha. Ya mere, ọ bara uru mgbe niile ịchọta okporo ụzọ site na nchọnchọ anụ ahụ ma a bịa n'inweta ego sitere na mgbasa ozi na mmemme mmemme. Otu ọzọ uru maka ịmepụta okporo ụzọ bụ na ị nwere ike belata ọnụego ọnụ ma melite ahụmịhe ọrụ na saịtị gị.
Usoro ọrụ iji mụbaa okporo ụzọ search engine
Ka anyị tụlee ụfọdụ usoro bara uru bụ ndị nwere ike inyere gị aka imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị, bulie ọnụọgụ ntinye ma nwetakwuo okporo ụzọ ezubere iche.
Nchọpụta njin search engine
SEO bụ mgbagwoju nke usoro nyocha kachasị nke bụ iji bulie mkpokọta weebụ dịka usoro nyocha ọchụchọ. Dị ka ihe nchọgharị dịka Google kachasị nlekọta ọrụ na otu ebe ịntanetị, ị kwesịrị ịme ihe kachasị mma ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na-eji eme ihe na onye nwere ike ịnweta. Ọzọkwa, saịtị gị kwesịrị ịbụ ihe dị mkpa maka ajụjụ onye ọrụ. E nwere ụdị SEO abụọ na nke dị na peeji nke. Onye na peeji nke nwere ike ịduzi gị na ndị ọkachamara SEO gị. Ha na-agụnye ederede ọdịnaya, nchọpụta isiokwu, njikọta njikọta njikọta na imewe ihe nchọgharị weebụ. Nwepu-ibe SEO na-akpụpụta ikike saịtị na anya nke engines ọchụchọ. Ịkwesịrị ịmepụta mgbalite ụlọ ọrụ njikọ iji meziwanye ebe nrụọrụ weebụ ma mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dịkwuo anya na SERP. Ọzọkwa, ị ga-achọ ijide n'aka na saịtị gị nwere ike ịchọta site na ịchọgharị bọtịnụ ka ị nwetakwuo okporo ụzọ nyocha. Iji tụọ mmeri mgbasa ozi gị, ị nwere ike iji ngwá ọrụ Google Analytics na Semet Web Analyzer.
Ịzụ ahịa ọdịnaya bụ ụzọ zuru okè na nke kachasị mfe iji nweta ụgbọ okporo ígwè search engine. Isi ihe ga-eme ka ị nwee ọganihu dị ukwuu bụ ịmepụta ọdịnaya maka ndị ọrụ, ọ bụghị maka engines ọchụchọ. Ihe mkpokọta weebụ gị kwesịrị ịdị mkpa maka ihe ndị ahịa gị nwere ike ịchọ. Ịkwesịrị inye ndị ọkachamara gị ọkachamara ọkachamara banyere isiokwu ha nwere mmasị ịmepụta aha njirimara gị na iguzosi ike n'ihe gị. Jide n'aka na ọdịnaya gị dị iche, dị mkpa ma na-adị ugbu a. Ọzọkwa, tinye ụfọdụ mkpụrụokwu dị na ya, karịsịa na utu aha iji mee ka bọtịnụ ọchụchọ nyochaa saịtị gị Source .